Kuba abantu abafuna ukulungelelanisa kwintsalela, imodeli ufakelo kunye nemodeli yoqwalaselo lwe pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Kuba abantu abafuna ukulungelelanisa kwintsalela, imodeli ufakelo kunye nemodeli yoqwalaselo lwe pa parlour
Wena ke, ndaya elibe fans, ndicinga ukuba ukhetha umdlalo imifuziselo khangela kuyo yonke evenkileni kuqala. Ngoko ke, ukuba uzama ukufumana na, nokuba kufuneka adlale ngayo nayiphi na imifanekiso, iivenkile nawuphi na umxube modeli iya kuqhubeka ukujonga indlela elungileyo. Pa store, kodwa baxhotyiswe ezahlukeneyo imifuziselo, inxalenye endifuna ukuba isiqinisekiso engcono a hit amathuba enkulu.
ngoku, pa zombini slot, kuba phephancwadi kuphume lukhulu, zama ukukhangela phambi kokuba uye kudlala.
pa, ukusuka hit okuba omkhulu kuthiwa imifuziselo eliphezulu Imfono-zezirhubuluzi, iintlobo de imodeli yindlela esezantsi leyo kuthiwa Dejihane. Kuba slot, ngokutsho sicwangciso, kukho amathuba leyo ibizwa ngokuba uqhekeko ngoomatshini.
koko ufuna ukuba uhlobo ukudlala ngayo, mna iyantlukwano imifuziselo ukuze ukhethe ephuma, amathuba ekucetyiswa kakhulu pa i modeli leyo kuthiwa uhlobo specs ephakathi. uhlobo iinkcukacha Middle, bekuya kuba kwinqanaba eliphakathi le jackpot amathuba ophezulu-zezirhubuluzi kunye Dejihane.
Dejihane ngokwaneleyo, kodwa akukho lula ukuba ukubetha, njengoko phezulu-zezirhubuluzi, kungekhona inxalenye nokuba tight ngamakhoboka ke, ndithi ukuba nalo ngaphantsi sele, nayo ogqiba kulindeleke mali kwi pa. It is a win enkulu kunye nawo ukuba phezulu-zezirhubuluzi kuyanconywa, kodwa ekubeni idle yinto enkulu, kukho kungenzeka ukuba kobuntu zotyalo ukudumba elikhulu, kananjalo kufuneka ukulungela woyiswa enkulu.
Dejihane yaye ukuthetha, jackpot liya kutshona ngoko nangoko, kodwa intlawulo ezincinane kulungile ukuba ngenjongo lokudlalela, asinto ifanele ukuba unqwenela ukuphumelela.
Ngendlela, kumngxunyana phantse ibekwe 1 yeTheyibhule kwi pa parlour. Kukho kwakhona umyolelo xa izicwangciso eziphakathi nazo wangena iimoto ezininzi ukuze ubonise ibhola ngaphandle, kodwa 6 sentlalo, ndicinga ukuba kuhle ukuba ucinge into encinane wangena kwishishini yesiqhelo.
Ngoko ke, ingqalelo na umatshini zahlulwe kwimeko sentlalo-1. Ukusondela umatshini eyabelwe 100 ekhulwini iseti-1 kuya kuba lula, ukutsala isixa mali ibhonasi ngaphantsi. Ukongeza slot, A umatshini T kunye umatshini ART kunye umatshini eqhelekileyo, okanye nayo ephuma umahluko zemigaqo. Lo matshini yesiqhelo, ndivuka nabo RT function, umatshini ekwahlulweni ngendlela apho imiselwe 1, kukho isimo ephakamileyo kancinci.
kwabasaqalayo kukuthi, umashini eqhelekileyo akukho iinkcukacha le RT, njl ngaphandle ungenelelo zobugcisa kucetyiswa push amehlo. Pa zombini slot, kodwa akukho ndlela ezifana ngokuqinisekileyo siphumelele, kufuna utyalo-mali ngaphantsi, kubalulekile ukuba ukhethe umdlalo lula kukhombisa kweWCED nayo kulindeleke. Ukususela phakathi
ukudlala lula ukubonisa umzekelo, ukufunda nokulatyuza umatshini kwi isibane data, aqingqa lowo ukutyala, siza kwandisa ipesenti yakho ngokuphumelela kunokuba ukudlala ongayaziyo. Emva koko, kunye nendlela ezithe zaphumelela ngaphambili, ukuba Hamba ekhethiweyo kunye imifuziselo ukuba ufuna ukudlala, ndicinga okanye engaphezulu ukonwabela pa.
Ukuba ufuna slingshot, khetha i ufakelo ivenkile ezininzi uhlobo specs rhoqo, kwimeko apho slot, khetha ivenkile yakho ibekwe 1 matshini ukwahlula kukho imifuziselo ezininzi esisondele ku-100%, unandipha ezahlukeneyo imifuziselo Nceda khangela kulo.
ukuba ukuphumelela kwakhona kubalulekile, kodwa iqhinga ukuba kwi ezimnyama ulungelelwano oko singalahlekani na ngakumbi. Ukuba ungumsebenzisi phambili, mna ndiyathemba ukuba ejoliswe unonophelo ophezulu zezirhubuluzi ngakumbi nangakumbi, abantu abafuna okungakuncedayo ixesha intsalela, kucetyiswa ukuba nihambe ngayo umxholo ukuba singalahlekani ngaphezu win. Kwaye imifuziselo aseke iphumelele ngaphambili, ukuba Hamba ekhethiweyo kunye imifuziselo ukuba ufuna ukudlala, ndicinga ukuba bekuya kuba ngakumbi kunandipha pa.
ukuba ukuphumelela kwakhona kubalulekile, kodwa iqhinga ukuba kwi ezimnyama ulungelelwano oko singalahlekani na ngakumbi. Ukuba ungumsebenzisi phambili, mna ndiyathemba ukuba ejoliswe unonophelo ophezulu zezirhubuluzi ngakumbi nangakumbi, abantu abafuna okungakuncedayo ixesha intsalela, kucetyiswa ukuba nihambe ngayo umxholo ukuba singalahlekani ngaphezu win.